बैंकिङ सेरोफेरो कार्यक्रम – Artha Rajniti – A complete digital NEWS अर्थ राजनीति
Category: बैंकिङ सेरोफेरो कार्यक्रम
बैंकिङ सेरोफेरो कार्यक्रम
डाक्टर साव थोरै मौद्रिक नीतिको चर्चा गरौन, समग्र अन्य व्यवसाय उद्योगि व्यवसायले यसलाई स्वागत नै गरेको पाइयो तर प्राइसिंगमा बैंकिंग क्षेत्रले अलिक असन्तुष्टि जनायो यहाँको धाराणामा विचारमा मौद्रिक नीति कस्तो रह्यो, यसका सकरात्मक र नकारात्मक पाटाहरु के के रह्यो डाक्टर साव ? म त मौद्रिक नीति एकदम सकारात्मकरुपले आएको म भन्छु । बैंक तथा वित्तीय […]
सर नमस्ते नमस्ते कार्यकर्म बैंकिंग सेरोफेरोमा स्वागत छ ! धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ! एकदम ठिक छु डाक्टरसाव दिनहरु कसरि बितिरहेका छन ।आज भोलि के मा बेस्थ हुनुहुन्छ, समय पनि अलि प्रतिकुल छ ? अहिलेको कोभिड्को महामारीको समय छ । यो सबैमा अफिस पनि आउनु पर्यो र अफिस पनि संचालन गर्नु पर्यो र सुरक्षाका उपायहरु पनि […]